«Lahatsary an-tserasera Niaraka»pirenena voalohany tambajotra sosialy ny namana toy izany koa ny tombontsoa avy amin’ny lamaody vavahadin-tserasera, sy ny soso-kevitra ihany koa ny fampiharana ny glossy gazety cosmopolitan sy Playboy.
Foto-kevitra tsara indrindra fampiharana fifantenana ny AppStore (misesy fizaran-taona)
Tena ilaina ny fampiharana an-tserasera ho an’ny Muscovites gazetiboky Elle
Ny rindrambaiko maimaim-poana»Lahatsary an-tserasera Niaraka»dia hamela anao mba mihaona sy mifandray amin’ny olona izay akaiky. tambajotra sosialy miaraka amin’ny tena feno vaovao momba ny zavatra rehetra ny zava-dehibe indrindra-tanàna zaridaina, — bahoaka ny tanimboly, ny tranom-bakoka, ny firenena midadasika, mpandeha an-tongotra faritra sy ny vanin-taona mafana trano fijerena sinema, cafés, tora-pasika sy fanofana, playgrounds sy mangina fialam-boly faritra, ny tranom-bakoka sy ny dihy pop, dobo filomanosana sy ireo kianja filalaovana tennis, basket ny zaridaina sy ny zava-mitranga amin’ny andro firavoravoana sy tsy tapaka ny fanatanjahan-tena fandaharana, fahafahana hanorina lalana ny toerana fialan-tsasatra, ny zaridaina eo amin’ny map, ny banky angona-baovao tsy tapaka ny sary, ny tsy fivadihana fandaharam. Ankehitriny, ny Fiarahana, ny fifandraisana sy ny fivoriana eo ny mpitsidika ny zaridaina dia nanao izay azo atao ny tombontsoa (Bisikileta, movies, fisakafoana, ny tora-pasika ny fialan-tsasatra, rollers, skates, haingam-pandeha, ny boky, ny fampirantiana, ny fanatanjahan-tena, mendrika, rindran-kira, ny alika, ny natiora, ny daty).»Lahatsary an-tserasera Niaraka»ny zava-drehetra tokony avy amin’ny fampiharana, sy ny maro hafa. Ny fahafahana nihaona mahaliana ny olona ao an-tanàna, penpal, Mampiaraka, lehibe ny fifandraisana sy ny fitiavana. Tsy manontania tena hoe»raha Te handeha hiaraka amiko.»na»Rehefa izy no manasa ahy.»Manasa anao ary amin’izao fotoana izao.
Te-hijery ny toerana tena sarimihetsika any ivelan’ny trano sinema.
Mandehana any amin’ny amoron-dranomasina
Na amin’ny tantaram-pitiavana daty rehefa afaka izany rehetra izany, dia efa fahavaratra. Mahita olona iray mba hizara ny fialam-boly sy ny namana, fanampiana»Lahatsary an-tserasera traikefa»maimaim-Poana.
Raha misafidy malalaka firesahana amin’ny efi-trano sy ny Mampiaraka toerana satria rehefa manoratra»nahoana no tsy.»na»ndeha isika hiresaka.»talohan’ny fihaonana ny ankizilahy na ny ankizivavy dia afaka haharitra ela.
Na ny resaka dia tsy handao ny tany Internet chat no virtoaly
Toy izany koa tsy mitonona anarana safidy: zava-miafina ny fifandraisana zara raha mitondra any amin’ny zavatra lehibe.»Lahatsary an-tserasera Niaraka»manolotra ny hihaona olona sy lasa namany any ivelany ny tambajotra, tsy misy mpanelanelana. Ny fitenenana mahazatra olom-pantatra mety ho ny fiandohan ny fifaneraserana na fifandraisana matotra miaraka amin’ny hafatra tokana afaka manomboka manan-danja indrindra ny resaka eo amin’ny fiainana, na mandalo raitra, oroka, tantaram-pitiavana iray ny hariva.
Andramo izany amin’izao fotoana izao ary hahita
Hihaona, raiki-pitia, mahita ny rehetra izao ny mahaliana ny fivoriana: iraisam-pirenena Mampiaraka, zava-miafina Mampiaraka sy mahagaga nahafinaritra.
Afaka maka ny rindrambaiko maimaim-poana ho an’ny Android tsy misy fisoratana anarana sy ny hafa ny zava-tsarotra. Hihaona, daty, resaka momba ny zava-dehibe, raiki-pitia, oroka sy oroka, ny tena mahaliana ny olona vaovao, ny namana vaovao na tsara indrindra ny zazavavy efa miandry ao ny application»Lahatsary an-tserasera ny Fiarahana»
Good fivoriana fisoratana anarana →